६१ करोडको लागतमा ‘नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निमार्ण ! | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
६१ करोडको लागतमा ‘नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निमार्ण !
बाँकेमा ‘नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण हुने भएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ६१ करोडको लागतमा औद्योगिक क्षेत्रको निमार्ण हुने भएको हो ।
रकम विनियोजनभएसँगै निर्माणकार्य द्रुत रुपमा अगाडि बढाइएको छ । यो सँगै ‘नौवस्ता औद्यागिक क्षेत्र परियोजना’ कार्यालय पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
सङ्घीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक बर्षमा रु ६१ करोड खर्च गर्दैछ । बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा सम्याउने, खाल्टाखुल्टी पुर्ने, प्लट बनाउने लगायतको कार्य हुने छन् । सडक ट्र्याकको सम्भावना र यसका लागि काम पनि चालू आवमा नै बढाउने योजना रहेको छ ।
बैजनाथमा ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको केही भागमा बस्ती रहेकाले डिपिआर भइसकेर पनि घरधुरी सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा भएको अवस्था रहेको छ ।